Fanamarihana Tamin’ny Fivorian’ny Fikambanana Nandritra Ny Fihaonambe 2017: Apetraho Ny Fanehoan-kevitra! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2018 4:08 GMT
Tia miara-miasa sy mifampizara hevitra ny mpikambana ao amin'ny GV. Sary avy amin'ny mpanoratra, Jer Clarke.
Miarahaba ny GVers rehetra! Indrisy, tonga ary efa lasa ny fihaonambe GV 2017, saingy mbola manana fahatsiarovana isika – ary fanamarihana marobe nangonina nandritra ireo fotoam-pivoriana maro. Tamin'ny fotoana farany, nanangona ireo fanamarihana rehetra azonay ny ekipa fototra sasantsasany (Eddie, Ellery, Lauren sy ny tenako) ary nametraka azy ireo tamin'ny endrika azo zaraina.